2Ki 2 | Shona | STEP | Zvino nguva yakati yasvika Jehovha yaakada kukwidza Eria nayo kudenga nechinyamupupuri, Eria akaenda naErisha vachibva Girigari.
Eria anokwira kudenga
1 Zvino nguva yakati yasvika Jehovha yaakada kukwidza Eria nayo kudenga nechinyamupupuri, Eria akaenda naErisha vachibva Girigari. 2 Eria akati kuna Erisha, "Iwe chigara pano,nokuti Jehovha wakandituma Bhetieri." Erisha akati, "NaJehovha mupenyu, uye nomweya wenyu mupenyu, handingakusiyi." Naizvozvo vakaburukira Bhetieri.
3 Zvino vanakomana vavaporofita vaiva paBhetieri, vakasvika kuna Erisha, vakati kwaari, "Munoziva here kuti Jehovha uchakubvisirai tenzi wenyu nhasi?" Iye akati, "Hongu, ndinoziva; nyararai henyu."
4 Eria akati kwaari, "Erisha, iwe chigara pano, nokuti Jehovha wakandituma Jeriko." lye akati, "NaJehovha mupenyu, uye nomweya wenyu mupenyu, handingakusiyiyi." Naizvozvo vakasvika Jeriko.
5 Zvino vanakomana vavaporofita, vaiva paJeriko, vakaswedera kuna Erisha, vakati kwaari, "Munoziva here kuti Jehovha uchakubvisirai tenzi wenyu nhasi?" Iye akapindura, akati, "Hongu, ndinoziva, nyararai henyu."
6 Eria akati kwaari, "Iwe chigara pano, nokuti Jehovha wakandituma kwaJorodhani." Iye akati, "NaJehovha mupenyu, uye nomweya wenyu mupenyu, handingakusiyiyi." Ivo vari vaviri vakapfuura havo. 7 Zvino varume vana makumi mashanu vavanakomana vavaporofita vakaenda vakandomira pakatarisana navo vari kure; ivo vari vaviri vakamira paJorodhani. 8 Ipapo Eria akatora nguvo yake, akaipeta, akarova mvura, ikaparadzaniswa napakati, naizvozvo ivo vaviri vakayambuka pakawoma. 9 Zvino vakati vayambuka, Eria akati kuna Erisha, "Kumbira chandingakuitira, ndichigere kubviswa kwauri." Erisha akati, "Ndipei migove miviri yomweya wenyu."
10 Akati, "Wakumbira chinhu chinogozha; asi kana ukandiona ndichibviswa kwauri, uchaitirwa izvozvo; asi kana usingandiwoni, haungaitirwi izvozvo."
11 Zvino vakati vachifamba, vachingotaurirana havo, ngoro yomoto namabhiza omoto zvikasvika, zvikavaparadzanisa ivo vaviri; Eria akakwira kudenga nechinyamupupuri. 12 Erisha akazviona, akadanidzira, achiti, "Baba vangu, baba vangu, ngoro yaIsiraeri navatasvi vayo vamabhiza " Akasazomuonazve; akabata nguvo dzake akadzibvarura napakati. 13 Akanonga jasi raEria rakanga rawa kwaari, akadzoka akamira pamhenderekedzo yaJorodhani; 14 akatora jasi raEria rakanga rawa kwaari, akarova mvura,
akati, "Jehovha Mwari waEria uripiko?" Zvino wakati arova mvura, ikaparadzaniswawo napakati, Erisha akayambuka. 15 Zvino vanakomana vavaporofita vakanga vari paJeriko pakatarisana naye, vakati vachimuona, vakati, "Mweya waEria wogara pamusoro paErisha." Vakandosangana naye, vakakotamira pasi pamberi pake. 16 Vakati kwaari, "Tarirai, isu varanda venyu, tina varume vana makumi mashanu vane simba; ivo ngavaende havo kundotsvaka tenzi wenyu, zvimwe Mweya waJehovha wamukwidza, ukamukandira pane rimwe gomo, kana muno mumwe mupata." Iye akati, "Regai henyu kuvatuma." 17 Asi ivo vakati vamugombedzera, kusvikira anyara, akati, "Tumai henyu." Naizvozvo vakatuma varume vana makumi mashanu, vakatsvaka mazuva matatu, asi havana kumuwana.
18 Vakadzokerazve kwaari achiri paJeriko, iye akati kwavari, "Handina kukuudzai here, ndikati `Regai kuenda.' "
Erisha anorapa mvura yeJeriko
19 Zvino varume veguta vakati kuna Erisha, "Tarirai, henyu, nzvimbo yeguta yakanaka hayo, sezvamunoona, ishe wedu, asi mvura yakaipa, nenyika haibereki zvakanaka." 20 Iye akati, "Ndivigire ndiro itsva, mugoisa munyumo." Vakamuvigira iyo. 21 Akaenda kuchitubu chemvura, akadira munyu imomo, akati, "Zvanzi naJehovha, `Ndarapa mvura iyi, hapachazobvipo rufu, kana kusabereka.' " 22 Naizvozvo mvura ikarapwa kusvikira, nhasi sezvakataura, iye Erisha.
Vana, vanoseka Erisha, vanourawa namapere
23 Zvino wakabvapo, akaenda Bhetieri; akati achikwira nenzira, zvikomana zvikabuda muguta, zvikamuseka, zvikati kwaari, "Iwe nyamanza, kwira, iwe nyamanza, kwira!"
24 Iye akacheuka, akavaona, akavatuka nezita raJehovha. Ipapo maperekadzi maviri akabuda mudondo, akaparadza vana vana makumi mana navaviri vavo. 25 Akabvapo akaenda kugomo reKarimeri, akabvapo akadzokera Samaria.